Kodzero-dzevanhu, 19 Chikumi 2017
Muvhuro 19 Chikumi 2017
Zanu PF Yoramba Yakanyarara Pakuti Chix Chingaira Oitwa Gamba Here Kana Kuti Kwete
Mumwe anoteerera nziyo dzaChinx, Muzvare Mavis Kambunda, vati havaone chiri kunetsa kuti hurumende itore nguva ichizeya kuti yopa mufi ruremekedzo rwegamba renyika here kana kuti kwete kana pakatariswa nhoroondo yake.
Vamwe vakuru vemabhizimi vari kukurudzirabanga guru renyika kuti vagadzirise dambudziko rekusashanda zvakanaka kwe chiroongwa chekuita bhizimisi pachishandiswa “real time gross settlement” kana kuti RTGS kumabhanga.
MDC-T, ZESN Voshora ZEC paHurongwa Hwekuti Vanonyoresa Kuvhota Vaburitse Tsamba dzePavanogara
Masangano maviri aya anoti vakawanda vevanhu vanovhota mumaguta vanhu vanoroja kana kuti vana vevaridzi vedzimba, izvo zvichazoita kuti vanetseke kuwana magwaro anodiwa aya.
Nhengo yeYouth League mudunhu reBulawayo, VaFundisani Dewa, vakati kunyange hazvo zviri pachena kuti vechidiki ndivo vakawanda munyika, musarudzo dzapfuura vechidiki vakawanda havana kuvhota vachitiwo.
Vechidiki muZimbabwe Vanocherechedza Zuva reDay of The African Child
Zuva reThe African Child rakatanga kucherechedzwa muna 1991 pachirangarirwa kuurayiwa kwakaitwa vana vemuSoweto nehurumende yerusarura muSouth Africa muna 1976 apo vana ava vairwira kodzero dzavo.
ZimRights Yodzidzisa Vanhu Pamusoro peKukosha kweRunyararo neKugarisana
Mukuru weZimRights, VaOkay Machisa, vanoti havasi kungotora vanorwira kodzero chete, asi kuti vanoremekedzwa mumatunhu avagere, sezvo vari vanhu vane mazwi anogona kuteererwa kana nevezvematongerwo enyika
Vanhu Vomanikidzwa Kuenda kuMusangano waVaMugabe kwaMutare?
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vari kutarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo veYouth League kuSakubva Stadium nemusi weChishanu.
Mugodhi weEldorado Wopedza Vanhu Uchidhirika
Vanhu vanokorokoza goridhe vanosvika vana vakafa vanhu vakawanda vakakuvara mumavhiki maviri apera panzvimbo yakatorwa nenhengo dzevechidiki dzeZanu PF kumugodhi weEldorado pedyo neChinhoyi.
VaMushowe Vanokundikana Zvakare Kumira Pamberi peKomiti yeParamende
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaChristopher Mushowe, neChina vatadza zvekare kuuya kukomiti yeparamende kuti vazotaura matanho ari kutorwa nehurumende mukugadzirisa mitemo inombunyikidza vatori venhau pamwe nekusunungura masai sai ematerevhizheni.
Chikumi 14, 2017
Vanhu Vokurudzirwa Kuti Vape Ropa Kubatsira Vanenge Vapinda muNjodzi
Vamwe vagari vemuBulawayo vacherechedza zuva reWorld Blood Donor Day veNational Blood Services of Zimbabwe vachikururdzira vanhu vakuru kunyanya kuti vazvipire kupa ropa pachena.